China Cantilever Climbing Formwork orinasa sy mpamatsy |Lianggong
Ny cantilever climbing formwork, CB-180 sy CB-240, dia ampiasaina indrindra amin'ny fandatsahana simenitra amin'ny faritra midadasika, toy ny tohodrano, pier, vatofantsika, rindrina fihazonana, tonelina ary lakaly.Ny fanerena lateral amin'ny simenitra dia entin'ny vatofantsika sy ny tady fatorana amin'ny rindrina, ka tsy ilaina ny fanamafisana hafa ho an'ny formwork.Izy io dia aseho amin'ny alàlan'ny fampandehanana tsotra sy haingana, fanitsiana midadasika ho an'ny haavon'ny fanariana tokana, ambonin'ny simenitra malama, ary ny toekarena sy ny faharetana.
Ny cantilever formwork CB-240 dia manana singa manainga amin'ny karazany roa: karazana brace diagonal sy karazana truss.Ny karazana Truss dia mety kokoa amin'ny tranga misy enta-mavesatry ny fanorenana, fananganana formwork avo kokoa ary faritra kely kokoa.
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny CB-180 sy CB-240 dia ny bracket lehibe.Ny sakan'ny sehatra lehibe amin'ireo rafitra roa ireo dia 180 sm sy 240 sm tsirairay avy.
● Toeram-ponenana ara-toekarena sy azo antoka
Ny cones mihanika M30/D20 dia natao manokana ho an'ny betonika amin'ny lafiny tokana amin'ny fampiasana CB180 amin'ny fanamboarana tohodrano, ary ahafahana mamindra ny hery mihenjana sy henjana be ao amin'ilay simenitra mbola vaovao sy tsy nohamafisina.Raha tsy misy tady fatorana rindrina dia tonga lafatra ny simenitra vita.
● Marin-toerana sy lafo vidy ho an'ny entana avo
Ny elanelan'ny bracket malalaka dia ahafahan'ny vondrona formwork amin'ny faritra midadasika amin'ny fampiasana tsara indrindra ny fahafaha-mitondra.Izany dia mitarika ho amin'ny vahaolana tena ara-toekarena.
● Fanomanana tsotra sy mora azo
Miaraka amin'ny CB180 tokan-tena fihanihana formwork, ny rafitra boribory dia azo amboarina ihany koa nefa tsy mandalo drafitra lehibe.Na dia ny fampiasana amin'ny rindrina mitongilana aza dia azo atao tsy misy fepetra manokana satria ny enta-mavesatry ny simenitra fanampiny na ny hery manainga dia azo afindra soa aman-tsara ao anatin'ilay rafitra.
● Mahazaka mitondra
Ny fahafaha-mametaka avo lenta amin'ny bracket dia mamela ireo singa scaffold tena lehibe.Izany dia mamonjy ny isa vatofantsika teboka ilaina ary koa ny fampihenana ny fotoana fiakarana.
● Fomba fihetsehana tsotra amin'ny vano
Amin'ny alàlan'ny fampifandraisana matanjaka amin'ny formwork miaraka amin'ny scaffold fiakarana, izy roa ireo dia azo afindra amin'ny alàlan'ny vano.Noho izany dia azo atao ny mitsitsy fotoana sarobidy.
● Fihetseham-po haingana tsy misy cran
Miaraka amin'ny retrusive set, ny singa formwork lehibe dia azo alaina haingana sy ezaka kely indrindra.
● Azo antoka amin'ny sehatry ny asa
Ny lampihazo dia tafangona tsara miaraka amin'ny bracket ary hiara-hianika, tsy misy scaffolding fa afaka miasa tsara na dia eo aza ny toerana misy anao.
teo aloha: Customized Steel Formwork
Manaraka: Efijerin'ny fiarovana sy ny fampidinana entana